देशभक्त राजा महेन्द्र नै हुन्
हुनुपर्ने पहिले देश, अनि राजनीति हो ।
देशभक्तिका मुद्दामा राजा महेन्द्रजस्तो को छ ? आज जे छ, ती सबै आधारभूत संरचनाहरु राजा महेन्द्रका देन हुन् । २०१७ सालदेखि २०२८ सालसम्मको ११ वर्षमा राजा महेन्द्रले नेपालको राष्ट्रवाद मजबुतमात्र पारेनन्, नेपालको व्यक्तित्वलाई राष्ट्रसंघका माम्यमबाट विश्वसमक्ष अग्लो बनाए । महेन्द्र कालखण्ड त्यस्तो समय थियो, जुनबेला नेपालले के बोल्छ भनेर विश्वले कान ठाडो पारेर सुन्थ्यो । आज नेपाललाई कसले सुन्छ ? राजनीतिमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन भएको १३ वर्ष भयो, यो १३ वर्षमा नेपालको व्यक्तित्वको क्षयीकरणबाहेक केही भएन । एउटै कुराको विकास भएको छ, अनैतिकता । भ्रष्टाचार बढेको छ ।
विश्व रङ्गमञ्चमा नेपाललाई उभ्याउने राजा महेन्द्र । अनेक जातिलाई एकतावद्ध पारेर एकीकरणको भावधारामा जोड्ने राजा महेन्द्र, नेपालको दीर्घकालीन विकासको आधार तैयार गर्ने राजा महेन्द्र, छुवाछुतको अन्तदेखि भूमिसुधारका क्रान्तिकारी कदम चाल्ने राजा महेन्द्र, नेपाली मुद्रादेखि नेपाली भाषाको उन्नयनमा ठूलो योगदान दिने राजा महेन्द्र, महेन्द्रकालको ११ वर्ष हेरौं, वर्तमान लोकतन्त्तकाल हेरौं ?
आज राष्ट्रको पतन गर्ने गराउने राजनीति बाहेक छ के ? नयाँ नयाँ राजाहरु उत्पादन गरेर जनतामाथि सामन्त भएको आरोप लगाउने शासक । १३ वर्षमा जो गरीव नेता थिए, ती सबै आज अरवका शेखजस्ता भएका छन् । राजनीतिलाई व्यवसाय र व्यापार बनाउनेहरु लोकतन्त्रको गुड्डी हाँक्छन् । लोकतन्त्रमा लोक बलियो हुनुपर्ने हो, लोक कमजोर बने । लोक कमजोर भएपछि देश कमजोर हुने नै भयो ।
राजा महेन्द्रलाई गालीगलौज गरिन्छ, अप्रजातान्त्रिक भनेर आरोप लगाइन्छ । प्रजातान्त्रिक शासनमा देश किन कमजोर भयो, कूशासन किन बढ्यो, लोक किन पीडावोध गरिरहेको छ ?
राजा महेन्द्र पञ्चायतका प्रवर्तक थिए । उनी नै हुन् जो नेपाललाई विश्वका सामु उभ्याउन सफल थिए । यी लोकतन्त्रवादीले नेपाललाई रसातल पु¥याइसके, यिनकै प्रशस्ती जनताले गर्नुपर्ने ? सबैभन्दा ठुलो कुरा विश्वास र भरोसा हो, जुन विश्वास र भरोसा महेन्द्रमा थियो, लोकतन्त्रमा छैन ।
राष्ट्र बलियो पार्न जनतालाई बलियो पार्नुपर्छ । जनताको शोषण गरेर नेता त बलियो बनेका छन्, राष्ट्र मजबुत हुनसकेन, राष्ट्र साहै्र कमजोर भयो ।
भरतराज प्रसाई भन्नुहुन्छ– विशाल नेपाल राष्ट्र निर्माण कर्ता पृथ्वीनारायण शाह नबुझ्न खोज्नु सही ईतिहास ध्यान नदिनु नै आजको परिस्थितिले दिसाहीन एवम यी सब काम बिगार्ने १२ बुँदे नै हो । भ्रष्टाचार, बलात्कार, राष्ट्रघात भएकोछ, मैले अध्ययन गर्दा नेपाललाई बिश्वमा चिनाउने, छोटो समयमा देश बिकाश गर्ने, १८ घन्टा देश र जनताको चिन्तन मनन गर्ने युगपुरुष देशभक्त राजा महेन्द्र नै हुन् ।